Career – Entrepreneurs in Myanmar
Where Entrepreneurs Invest in their Future? (20 November 2015)
Where Entrepreneurs Invest in their Future? လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ၊ အသစ်စတင်ဖွင့်လှစ်သောလုပ်ငန်းများ နှင့် ကုမ္ပဏီကြီးများ အားလုံးကိုပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ မိမိတို့လုပ်ငန်းများတွင် အင်္ဂလိပ်စာနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် သောလူငယ်များ ကိုအလုပ်ခန့်လိုပါက နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ ၌အမေရိကန်စင်တာတွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် တစ်မူထူးခြားသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပြပွဲ “Where Entrepreneurs Invest in their Future”
SME Are you ready for investor? (18 November 2015)
November 14, 2015 One comment
အသေးစားအလတ်စား လုပ်ငန်းများအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရရှိရေးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ———————– လက်ရှိမှာ အခြေကျခိုင်မာနေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို သင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးပြီ။ သင့်မှာ အလုပ်တွေကများ ၊ ရည်မှန်းချက်ကလည်း ကြီးမား ၊ သင့်လုပ်ငန်းကိုလည်း ဒီထက်ပိုမို အောင်မြင်ချင် ၊ နောက်ထပ် စိတ်ကူးသစ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ချင် ၊ ကုန်စည်သစ်တွေကို ထုတ်လုပ်ချင် ၊ ပြီးတော့ဈေးကွက်အသစ်တွေထဲကို
SME Business Plan Creation and Competition (17 November 2015)
သို့ SMEs များ၊ Business Idea ရှိသောလုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်လိုသူများ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်စိတ်ပါဝင်စားသောလူငယ် Entrepreneur များရှင် နိုင်ငံတကာတွင် လုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်လိုသူ Entrepreneur များသည် ၄င်းတို့၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်လာရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ့သူ (Angel Investors )များအား၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာစေရန် Business Plan ပြိုင်ပွဲများတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ပြီး IDEA မှ PLAN ဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
Phandeeyar က ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် STARTUP CHALLANGE (Nov 14 ~ 22)
မိတ်ဆွေတို့ဆီမှာ Business idea တွေရှိပါသလား ? ဒါမမဟုတ် Startup တစ်ခုခု ပြုလုပ်ချင်ပါသလား ?? ဖန်တီးရာမှာ ကျင်းပမယ့် STARTUP CHALLENGE မှာပါဝင်လိုက်ပါ။ Global Entrepreneurship Week နဲ့ ပူးပေါင်းကျင်းပမယ့် STARTUP CHALLENGE ကို ဖန်တီးရာမှာ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ကနေ ၂၂ ရက်နေ့ထိကျင်းပပါ့မယ်။
Angel Investor Forum ဖိတ်ကြားခြင်း
MYEA kindly invites you to attend Angel Investor Forum which will be held at UMFCCI – Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry. Attendees will learn how to pitch to investors and the perspectives from angel investors about how they choose to invest in businesses. If you’re interested, just bring yourself to the event as follows. Date: November 5, 2015
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် မလေးရှာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာပြပွဲ တပ်မတော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့ လုပ်ငန်းရှင်များနေ့၊ ၃၀၊ ၉၊ ၂၀၁၅ နှင့် ၁၊ ၁၀၊ ၂၀၁၅ အများပြည်သူနေ့၊ ၂ ~ ၃၊ ၁၀၊ ၂၀၁၅
Nippon Business Networking Based on New Ideas 2015
ဂျပန်နိုင်ငံ METI နဲ့ UMFCCI တို့ ပူပေါင်းပြုလုပ်မယ့် Business Competition တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်ဦးတီထွင်လိုသူ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဆုရရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရသည်ဖြစ်စေ ဂျပန်နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ပုံတွင်ကြည့်ပါ။ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့အတွက် event page တစ်ခု ဖန်တီးထားပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်တွင် လေ့လာကြည့်ပါ။ https://www.facebook.com/events/1002012873154072/
Myanmar ICT fair ကျင်းပမည်
Myanmar ICT Fair ကို စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်မှ ၆ ရက်နေ့အထိ တပ်မတော်ခန်းမ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပမည်ဟု သိရသည်။
Myanmar Business Model Contest 2015
ကွန်ပျူတာပညာရေးလမ်းကြောင်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားပြီးသူများအတွက် “ကွန်ပျူတာပညာရေးလမ်းကြောင်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ” ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်